उपनिर्वाचनका लागि नेकपा र राजपाले उम्मेदवार टुङ्गो लगायो, काँग्रेस र समाजवादीले लगाउँदै
सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नं. ७ मा मात्र हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि नेकपा र राजपाले आफ्नो उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ ।
आउँदो मंसिर १४ गते हुन लागेको उक्त निर्वाचनका लागि नेकपा र राजपाले उम्मेदवार टुङ्गो लगाए पनि नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेको छैन् ।
छिनमस्ता गाउपालिका वडा नं. ७ मा निर्वाचित वडा अध्यक्ष प्रभाकर यादब जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सो पद खाली हुँदा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
यता वडा अध्यक्ष पदका लागि नेकपाबाट अच्छेलाल यादबको नाम टुङ्गो लागेको नेकपा श्रोतको दाबी छ भने राजपा नेपालको तर्फबाट प्रमिला देबी यादबको नाम टुङ्गो लागेको राजपा श्रोतको दाबी छ ।
नेकपाका अच्छेलाल यादव स्थानिय माविका विद्यालय व्वयस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन । स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका यादव गत निर्वाचनमा तत्कालिन वडा अध्यक्षमा निर्वाचित प्रभाकर यादवसँग झिनो मतले पराजित भएका थिए । त्यस्तै प्रमिला देवी यादव भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रभाकर यादबकी पत्नी हुन् ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उदयनाथ मण्डल, बिष्णु कुमार यादब र शिव नारायण मण्डलको नाम शिर्षपंक्तिमा रहेको राजविराज वडा नं. ५ का अध्यक्ष समिर झाले जानकारी दिएका छन् । ती तिन जना आकांक्षी मध्ये एक जना उम्मेदवार बन्ने वडा अध्यक्ष झाले बताए ।
यता समाजवादी पार्टीले हालसम्म उम्मेदवारको चयन गर्न सकेको छैन् । श्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टीले राजपासँग केन्द्रमा उपनिर्वाचनका लागि तालमेल मिलाएपछि मात्र उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने छ ।
मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा वडाध्यक्ष पदका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनले दल र कार्यकर्तालाई तताउन थालेका छन् । रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचनको मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएलगत्तै चुनावी सरगर्मि बढेको हो ।